आज विदेशबाट आए १२ सय नेपाली कुन देशबाट कति ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
आज विदेशबाट आए १२ सय नेपाली कुन देशबाट कति ?
बुधवार, असार १० २०७७
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पनि एकैदिन आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय गरी २४ उडान भएका छन् । ती उडानमध्ये अन्तरराष्ट्रियतर्फ सर्वाधिक १४ उडान भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । आन्तरिकमा पनि आज १० उडान भएका छन् ।
मङ्गलबार पनि अन्तरराष्ट्रियतर्फ १४ उडान भएको थियो । यी सबै उडान यात्रु चार्टर्ड तथा कार्गो हुन् । विभिन्न मुलुकबाट उद्धार उडानमार्फत आज १ हजार २ सइ भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।
विभिन्न एयरलाइन्सले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई धमाधम चार्टर्ड उडान गरी काठमाडौँ ल्याइरहेका हुन् । आज नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जेधाहबाट २ सइ २५ यात्रु र एक शव नेपाल ल्याएको छ । सोही एयरलाइन्सको जहाजले जापानको नारिताबाट १९ यात्रु ल्याएको छ । पुनः कुवेतबाट नेपाली ल्याउन त्यसतर्फ उडेको विमानस्थलले जनाएको छ ।
त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले कुवेतबाट १ सइ ५५, अबुधाबीबाट दुई उडान गरी क्रमशः १ सइ ४९ यात्रु र ३ बच्चा र, दमामबाट १ सइ ५४ र दोहाबाट २ सइ ८२ यात्रु काठमाडौँ ल्याएको छ । श्री एयरलाइन्सले म्यान्माको यंगुनबाट ९ यात्रु र एक बच्चा ल्याएको छ भने दोस्रो चार्टर्ड उडानका लागि उक्त एयरलाइन्स म्यान्मा उडेको विमानस्थलले जनाएको छ ।
टर्किस एयरलाइन्सले स्तान्बुलबाट दुई चार्टर्ड उडानमा क्रमशः २ सय ८० र २ सय ८२ यात्रु काठमाडौँ ल्याएको छ । त्यसैगरी मलेसियन एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट दुई उडानमा क्रमशः ७ र ४ नेपालीको उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएको छ । बिहीबार पनि अन्तरराष्ट्रियतर्फ १३ उडान हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । दोहा, दमाम, यङ्गुन, अबुधाबी, बहराइन, क्वालालम्पुर र जापानको नारितामा चार्टर्ड उडान हुने विमानस्थलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।